အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Minke Belluz ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Minke Belluz ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Minke ။ ပထမအမည်ကို Minke ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Minke ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Minke ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ Minke စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Minke Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
Minke မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
Minke အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
Minke အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: စေတနာစိတ်နှင့်, လေးနက်, ဖန်တီးမှု, ခေတ်သစ်, တက်ကြွ. ရယူ Minke နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Minke ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. ၏ ပတျသကျ။ အလှနျသေးနုနှင့်ဣတ္ပုံစံ လိုက်စီ။ ရယူ Minke ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ Minke: MIN-kə. Minke စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
Minke ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Fred သည်, Manfred, Manfredo, Manfried, Meginfrid, Meginhard, Meginrat, Meinard, လိုက်စီ, Meinhard, Meino, Meinrad, Menno. ရယူ Minke အခြားဘာသာစကားများ.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Belluz: Alfred, Rofiq Hidayat, Deanna, Una, Germaine, Alfréd, Úna, Ùna. ရယူ Belluz နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
Minke Belluz အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
Minke Belluz Fred သည် Belluz Manfred Belluz Manfredo Belluz Manfried Belluz Meginfrid Belluz Meginhard Belluz Meginrat Belluz Meinard Belluz လိုက်စီ Belluz Meinhard Belluz Meino Belluz Meinrad Belluz Menno Belluz